कुकुरले पुच्छर हल्लाउनुका रोचक कारण यस्तो छ ! – Online Khabar 24
कुकुरले पुच्छर हल्लाउनुका रोचक कारण यस्तो छ !
काठमाडौं : प्राय कुकुरले पुच्छर हल्लाइरहेको हुन्छ । हामीले जतिबेला पनि हेर्दा कुकुरको पुच्छर हल्लिरहेको मात्र देख्छौँ ।
तर कुकुरले किन पुच्छर हल्लाउँछ भन्ने बारेमा भने सोचेका छैनौँ होला । यस विषयमा निकै अनौठा कारण छ ।
कुकुरले ड’राएको बेला पुच्छर टाङ मुनि लुकाउँछ । तर खुसी भएको बेलामा भने यसले आफ्नो पुच्छर हल्लाउने गर्दछ । प्रायः सबै कुकुरको पुच्छर एकै प्रकारले बनेको हुन्छ । यो स–साना हाडहरु जोडिएर बनेको हुन्छ । अर्थात हाडहरु माला जस्तै जोडिएर कुकुरको पुच्छर बनेको हुन्छ ।
यसरी हाडहरुले बनेको पुच्छर थोरै माशंपेशीको मद्दतले पनि कुकुरले उसले चाहे अनुसारको जुनसुकै दिशामा हल्लाउन सक्छ । पुच्छर हल्लाउँदा कम माशंपेशी प्रयोग हुने भएकाले कुकुरहरु कम थाक्छन् र प्रायः सधैं पुच्छर हल्लाउने गर्दछन् । यो खबर साभार गरियको हो । यो पनि पढनुस, पति पत्नीबीच बेलाबेलामा झगडा पनि हुन्छ भने प्रेमपनि हुने गर्दछ।
Prevघान्द्रुक जीप दुर्घटनामा अस्ताएका पन्तले सानैमा बुबा र दाईलाई पनि सवारी दुर्घटनामै गुमाएका थिए !
nextमहिलालाई प्रभाव पार्न पुरुषमा हुनु पर्छ यस्ता गुण !